'रियालिटी शो'बाट चर्चित बनेका विश्‍वका सेलिब्रेटी
रामकला खड्का शुक्रवार, कात्तिक २४, २०७४ 2480 पटक पढिएको
बरिष्ठ साहित्यकार उषा शेरचन भारतिय टेलिभिजन च्यानलबाट प्रशारण हुने गीतसंगीत र नृत्य सम्बन्धि रियालिटी शोहरु प्राय हेर्न छुटाउन्‍न्। यी शोहरुमा अत्यन्तै कम उमेरका बालबालिकाले पनि निकै सुन्दर ढंगमा गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेको हेर्दा उनलाई रमाइलो लाग्छ।
जी टिभीबाट प्रशारण हुने सारेगमप लिटिल च्याम्पस गत साता मात्रै सकियो । यो आउन्जेल सँधै नछुटाइ हेर्ने गरेकी कवयत्री शेरचन हाल शनिवार र आइतबार बेलुकी स्टार प्लसबाट प्रशारण हुने डान्स च्याम्पियन नामक रियालिटी शो हेर्न भ्याएसम्म छाड्दिनन्।
यस अगाडि सोही च्यानलबाट प्रशारण भएको डान्स प्लसका बिजेता बीर राधा शेर्पाले पनि यो शोमा सहभागीता जनाएका थिए । शेर्पा सिक्कीममा बस्ने नेपाली हुन्।
हाल पनि डान्स च्याम्पिएनका एक प्रतिस्पर्धी नेपाली युवा शुसान्त खत्रीको नृत्य उनलाई असाध्यै मन पर्छ । यी शोहरु हेर्दा उनलाई नेपाली बालबालिका तथा युवायुवतीले पनि अवसर पाए भने संसारको जुनसुकै कुनामा गएर पनि आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्छन् भन्ने भान हुन्छ।
गत साता मात्रै जी टिभीमा प्रशारण सकिएको सारेगमप लिटिल च्याम्पमा पाँच वर्षीय बालक जयश कुमारले धेरैको मन जित्न सफल भएका थिए। दायाँपट्टि मुटु भएका यी बालकलाई शोमा सबैले अलौकिक बालकका रुपमा मान्थे। यहाँसम्मकी उक्त कार्यक्रमका निर्णायकमध्येका गायक हिमेश रेशमियाले त स्टेजमा गएर उनको खुट्टा ढोग्दै उनीसँग आर्शिवादसमेत मागेका थिए।
उनले पनि निकै सुन्दर र बालशुलभ शैलीमा हिमेशको टाउको माथि हात राख्दै आर्शिवाद दिएका दृष्यले कार्यक्रमका निर्णायकदेखि दर्शकसम्म खुब हाँसेका थिए। यीबाहेक उनको गायन प्रतिभाको पनि जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुने कार्यक्रमका निर्णायक एवं बाहिरबाट बोलाइने अतिथीले प्रतिक्रिया दिन्थे।
प्रतिस्पर्धी र दर्शक दुवै नेपाली
आइडल नामक रियालिटी टेलिभिजन गायन प्रतियोगिता बेलायती टेलिभिजन निर्माता सिमन फुलरको सिर्जनामा आधारित हो भने यसलाई फ्रिम्यान्टल मिडियाले विकास गरेको हो। यसको शुरुवात सन् २००१मा बेलायती टेलिभिजन सिरिज पप आइडलबाट भएको हो।
विस्तारै यो विश्वमै सबैभन्दा बढी हेरिने टेलिभिजन फ्रान्साइज शो बन्न पुग्यो। अमेरिकन आइडल: द सर्च फर अ सुपरस्टार फक्स नेटवर्कमा सन् २००२ जुन ११मा भएको थियो । यो अमेरिकन दर्शकको निकै लोकप्रिय शोमध्येमा रह्यो।
आइडलको फ्रान्साइजको रुपमा रहेको इन्डियन आइडलले भारतिय मात्रै नभई नेपाली दर्शको पनि मन जित्न सफल भयो। यस वर्षको विजेता बनेका एलभी रेभान्थको प्रस्तुति पनि निकै उम्दा भएकाले धेरै नेपाली दर्शकले पनि नछुटाइ यस कार्यक्रम हेर्ने गरेको पाइन्छ।
इन्डियन आइडल ३ का विजेता प्रशान्त तामाङका लागि भोटिङ गर्न नेपालीको ठूलै जनलहर उठेको थियो । नेपालीकै भोटले उनको जितमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो भन्दा फरक नपर्ला। रुद्रपुर, रुपन्देहीकी तेरिया मगरको झलक दिख्लाजामा पाएकी जितलाई पनि धेरैले आफ्नै खुसी बनाएका थिए।
शोमा पाएको सफलताले तेरियालाई भारतमा मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि निकै लोकप्रिय बनाएको छ।
सेलिब्रेटीसँगै चुलिएका शो
भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा सबैभन्दा चर्चित बनेको कौन बनेगा करोडपतिले हालसम्म नौ सिजन पार गरिसकेको छ। सबैभन्दा बढी पुरस्कार राशी हुनुका साथै बलिउडका सताब्दीकै सुपरस्टार मानिने अमिताभ बच्चनले कार्यक्रम संचालन गर्नु पनि कार्यक्रमको विशेषता हो।
कार्यक्रमको पहिलो तीन सिजन स्टार प्लस च्यानले प्रशारण गर्‍यो भने त्यसपछिका भागहरु सोनी च्यानलबाट प्रशारण भइरहेको छ। यो शोको सबै सिजन बच्चनले संचालन गरे तापनि तेस्रो सिजनमा भने बच्चनको बिग्रदो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनको सट्टामा शाहरुख खान देखा परेका थिए।
बिग सिनर्जी प्रडक्सनले निर्माण गरेको उक्त शो बेलायती शो 'हु वान्ट्स टु बी अ मिलेनियर'मा आधारति छ । सन् २०००मा प्रशारित पहिलो सिजनको विजेता हर्षवर्धन नवाथे एक सरकारी कर्मचारी थिए। सन् २००५मा प्रशारित दोस्रो सिजनमा बृजेश द्विभेदीले करोडपति हुने सौभाग्य पाए पनि यसैको विशेष इपिसोडअन्र्तगत सेलिब्रेटी दम्पत्ति अजय देवगन र काजोलले पनि करोड रुपैंया घर भित्र्याएका थिए।
उता शाहरुखले सञ्‍चालन गरेका तेस्रो सिजनमा भने दुर्भाग्यबस कोही पनि विजेता बनेनन्। त्यसैगरि शोको पहिलो महिला विजेता भने सिजन ९मा जमशेधपुरकी अनामिका मजुमधर बन्न सफल भइन्। समाजसेवामा सम्लग्न दुई सन्तानकी आमा अनामिकाले लाइफलाइन बिना नै करोड रुपैंयाका लागि सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ दिएर विजेता घोषित हुँदै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी हुन्।
गायन र नृत्यसँग सम्बन्धित रियालिटी शोभन्दा अलि भिन्न परिचय बोकेको बिग बस पनि धेरै नै लोकप्रिय मानिन्छ। नेदरल्याण्डको टीभी रियालिटी शो 'बीग ब्रदर'मा आधारित यस शोमा लोकप्रिय वा विवादमा रहेका सेलिब्रेटी निश्चित समयअवधिसम्म एउटा घरमा बस्ने र त्यही घरको नियम पालना गर्दै एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन्।
बलिउडका चर्चित नायक सलमान खानले उक्त शोलाई निकै पृथक शैलीमा संचालन गर्ने गरेका छन् । बिग बोसको पहिलो सिजनको विजेता बलिउडका अर्का नायक राहुल रोय बनेका थिए । बलिउड नायक अर्सद वार्सीले संचालन गरेका उक्त कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धीले ८६ दिनसम्म एउटै घरमा बिताएका थिए।
दोस्रो सिजनमा अर्सदका ठाउँमा नायिका शिल्पा सेठ्ठीले कार्यक्रम संचालन गरेकी थिइन् भने सिजन टुका विजेता आशुतोष कौशिकले एक करोड रुपैंया पुरस्कार पाएका थिए। त्यसैगरी सिजन ३लाई नायक अमिताभ बच्चनले संचालन गरेका थिए भने यसको विजेता नायक विन्दु दारा सिंह बनेका थिए।
सलमान खानले संचालन गरेका बिग बोसको पहिलो महिला विजेता भने टेलिभिजन कलाकार स्वेता तिवारी भइन्। बिग बोस सिजन ५लाई भने सलमानका साथमा संजय दत्तले संचालन गरेका थिए। यसपछि हालसम्म ११औं सिजनसम्म आइपुग्दा सलमानले नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन्।
बेलायति टेलिभिजन च्यानल ४बाट प्रशारण हुने सेलिब्रेटी बिग ब्रदर ५ले बलिउड नायिका शिल्पा सेठ्ठीको क्यारियरमा टर्नओभर नै ल्यायो । यस पछि उनले विभिन्न रियालिटी शोमध्ये केहीमा संचालक र केहीमा निर्णायकको भूमिका समेत निभाउँदै आएकी छिन्।
त्यसैगरि हाल स्टार प्लसमा प्रशारण भइरहेको रियालिटी शो लिप सिङ ब्याटलमा पनि उनले सहभागिता जनाइसकेकी छिन्। बलिउडकी चर्चित कोरियोग्राफर एवं निर्देशक फराह खानले संचालन गर्ने उक्त कार्यक्रममा शिल्पा नायक रितेश देशमुखसँग प्रतिस्र्धामा उत्रिएकी थिइन्।
भारतिय टेलिभिजन च्यानलमा पहिलो रियालिटी शो 'बर्नभिटा क्विज कन्टेस्ट(बीक्यूसी)' हो । यसलाई सन् १९७२मा डेरेक ओब्रियनले संचालन गरेका थिए। यो पहिले विभिन्न शहरमा प्रत्यक्ष शो गरिन्थ्यो भने पछि गएर रेडियोमा प्रशारण गर्दै सन् १९९२मा पहिलो पटक जीटीमा देखाइएको थियो।
यस पछि सन् १९९३मा सोही टेलिभिजनमा अन्नु कपुरले संचालन गरेका 'सानसुई अन्ताक्षरी'ले पनि दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय बन्न पुग्यो । सन् २००६सम्म प्रशारित उक्त पहिलो गायन सम्बन्धि रियालिटी शोले देश विदेशमा अन्ताक्षरी खेल्ने ट्रेन्ड पनि शुरु गरायो।
हाल भारतिय टेलिभिजन च्यानलमा सेलिब्रेटि संचालित शोहरुको बाहुल्यता बढ्दै गएको पाइन्छ । कपिल शर्माले बर्षौंसम्म संचालन गरेका 'द कपिल शर्मा शो'को न्यास्रो मेटाउँदै बलिउडका निकै लोकप्रिय नायक अक्षय कुमारले हाल स्टार प्लसमा द ग्रेट इन्डियन लाफ्टर च्यालेन्ज शो संचालन गरिरहेका छन्।
कुनै पनि रियालिटी शोमा भाग लिनका लागि हजारौं ब्यक्तिहरुले आवदेन दिएका हुन्छन् । तीमध्ये निकै कमै मात्रले अवसर पाउने गर्छन्। सहभागीताको अवसर नपाउनेले की त आफ्नो क्षेत्रनै परिवर्तन गर्छन् की भने अर्को शोका लागि प्रयास गर्छन्।
यसरी भारतिय टेलिभिजनका रियालिटी शोका पर्खाइमा रहेकाहरुका लागि कलर्समा प्रशारण हुने 'इन्डियाज गट ट्यालेन्ट'को सन् २०१८को सेसनका लागि अनलाइन आवेदन खुला भएको छ। सात वटा सेसन सफलतापूर्वक पार गरिसकेको यस शोले आठौं सोका लागि आवेदन दिनेमध्येबाट भारतका विभिन्न ठूला शहरमा अडिसन लिएर अन्तिम प्रतिश्पिर्दी छान्ने भएको छ।
चालिसको दसकमा नै रियालिटी टेलिभिजन शोले दर्शकमाझ ख्याति कमाइसकेका इतिहास भेटिन्छ। सन् १९४०मा एलेन फन्टले संचालन गरेका क्यान्डिड क्यामेराले पनि धेरैको जीवनलाई छुन सकेको थियो।
सन् १९८१बाट शुरु भएको अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल एमटीभी बढी जसो रियालिटी शोमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । सोही च्यानलमा प्रशारण हुने रोडिज कार्यक्रमको फ्रेन्साइजको रुपमा हाल हिमालय टेलिभिजन च्यानलबाट हिमालयन रोडिज प्रशारण भइरहेको छ। यसको विजेताले एक बजाज एभेन्जर मोटरसाइकल र २० लाख रुपैंया प्राप्त गर्नेछन्।
सन् २००० पछि रियालिटी शोले दर्शकको बढी नै ध्यान तान्न सकेको पाइन्छ। सोही वर्षदेखि शुरु भएको रियालिटी शो सर्भाइभरले हालसम्म सात वटा इम्मी अवार्ड समेत पाइसकेको छ। दस लाख डलर पुरस्कार सहित सीबीएस च्यानलको यो शोले ३४ सिजन पार गरिसकेको छ।
सन् २००६बाट शुरु भएको 'टप सेफ' कार्यक्रम खानाका पारखी मात्रै नभई आफ्नो क्षमता देखाउन तत्पर सेफका लागि एउटा उत्कृष्ट गन्तब्य बनेको छ। 'प्रोजेक्ट रनवे', 'द अमेजिङ रेस', 'द भ्वाइस', 'द ब्याच्लर', 'द रियल हाउसवाइभ्स'आदि पनि दर्शकले अत्याधिक रुचाएका रियालिटी शोमा पर्छन्।
मतदातालाई ओलीको पत्र : ‘अबको ५ वर्ष वामपन्थीलाई परीक्षण गर्नुहोस्' 4893
गृहमन्त्री खोइ ? 3196
अनेक प्रश्नमा कांग्रेस 65
गफले होइन, कामले समृद्धि ! 73
कथित कम्युनिस्ट अधिनायकवाद 201
‘भिजन सिन्ड्रोम'को बढ्दो समस्या 314
इटहरी उपमहानगरका फाइल अख्तियारको कब्जामा 1285
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8821
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14444